November 12, 2010 na 2:05 na
Akwa, na-ahụ ihe ọma n'ọrụ!
November 12, 2010 na 10:04 na
Nso ke ozi:
“Google Sitemaps XML Generator, der ịmachi ”
M nwere : Sitemap Version 3.2.4 und Transposh Version 0.6.6
Ma ọ dịghị asụsụ peeji nke na-kere XML.
November 12, 2010 na 10:33 na
Jide n'aka na i nwere ọhụrụ kwachie, dịka. wepụ & si aga kwachie, M emelitere na changelog, ma ugbu a, FAQ emi ọhụrụ kwachie, ọ bụrụ na ị ka nwere nsogbu Aga m eziga gị patched faịlụ.
Timo Ligi na-ekwu,
November 12, 2010 na 8:59 obi
Mgbe m na-etinye n'ọrụ “Google Sitemaps XML Generator” Transposh version ebe a 0.6.6 i nwere ike na-Google Sitemap XML nzaghachi nke “XML Parsing Error: mba mmewere okụt, Nweta Number 1, Kọlụm 1:” Otú ọ dị, mgbe m gbapụ Transposh version 0.6.6, Ọ na-agba Google Sitemap.
November 12, 2010 na 11:53 obi
A na-emelite kwa oge kwachie pụrụ ịchọta ebe a: http://trac.transposh.org/wiki/PluginSupportMatrix
November 12, 2010 na 10:24 obi
Otu nsogbu dị ka na mbụ nsụgharị ebe ọ bụ na 0.6.3: Mgbe kwalite m ịhụ “Okt_Oktober_abbreviation” kama “October” m blog. Otu ọ bụla dị mkpirikpi ụdị ọnwa mgbe German aha dị iche iche site na English aha. Ya mere, 0.66 ehichapụ ọzọ, version 0.61 ọzọ – ọ na-arụ ọrụ. Na proofes ahụ ngwa mgbakwunye na-eme ihe na-ezighị ezi. Ma achọghị m iji ngwa mgbakwunye na m ga-eji arụ ọrụ site na m edezi PHP… N'ihi ya, ihe ọ bụla kwalite n'ọdịnihu ga-idozi ya?
November 12, 2010 na 10:38 obi
Akpa, biko ike tiketi trac (trac.transposh.org)
Nke abụọ, biko gbalịa iji nyekwuo nkọwa banyere gị usoro (nke WP ị na-eji, wdg)
Nke atọ, ị nwere ike iwepu ihe gettext mwekota, kwesịrị ịbụ saa gị nke dị mma karịa downgrading na 0.6.1
November 13, 2010 na 12:04 na
M ike tiketi…
November 13, 2010 na 12:37 na
Ọsọ ọsọ na-aga nke ọma aka – Anaghị m chọrọ idezi PHP, na-agbanwe otu nhọrọ ke nhọrọ. Akwa! Ugbu a, ọ na-arụ ọrụ zuru okè ọzọ! Daalụ nke ukwuu!
November 13, 2010 na 12:26 na
ọ ga-ekwe omume na-adịgide adịgide menyụọ e-mail adresses si translation? (ma ndido urụk ye urls)
M pụtara na e wuru na-ọrụ, abụghị oge ọ bụla ihe no_translate na klas.
November 13, 2010 na 12:55 na
Dị ka m maara, ọbụlagodi urls (omume na-ekwesị akara dị ka omume) agaghị sụgharịrị, atule maka okwu nile ọ bụla ọ bụla ahịrịokwu ma ọ bụrụ na ọ pụrụ ịbụ na URL ma ọ bụ ozi nwere ike ike ụfọdụ ọkpụrụkpụ adị.
Ivo Minchev na-ekwu,
December 17, 2010 na 8:05 obi
M nwere ndabere nsogbu. M na-esonụ “500 – Couldn’t resolve host ‘svc.transposh.org'” mgbe m pịa “Ị ndabere a” button.
December 17, 2010 na 11:48 obi
Daalụ maka akuko,
Ekwere m ka ga-adị ọzọ nsogbu cloudflare dns, M ga-idozi nke a na nke na-abịa n'ụbọchị.